Isku Darka Taatikada Si Loo Kordhiyo Ka Qayb Qaadashada Emailkaaga. Martech Zone
Isku-darka Xeeladaha si loo Kordhiyo Ka-Qaybgalka Emailkaaga
Emailka ayaa iska amaahday suuqgeynta tan iyo aasaaskii barmaamijka. Meeshii “Boostada elektiroonigga ah” mar qura la moodo boostada qaab ahaan iyo shaqadeedaba, kala duwanaanshaha barxadda macnaheedu waa in farriin kasta ay ahaato mid shaqsiyeed, la qabsan kara oo ku hawlan dhagaystayaal kala duwan.
Sannadkan, suuqleyyaashu waxay u baahan yihiin inay joojiyaan tixgelinta tiknoolajiyada emaylka iyo xeeladaha sida qalabka keligood ah, laakiin halkii ay ka ahaan lahaayeen qaybo ka mid ah xujo aad u ballaadhan, Marka sidaa la yeelo waxay u oggolaan doontaa suuqleyda inay hal-abuurnimo, hal-abuurnimo iyo caqli badan ku yeeshaan iimaylkooda. Halkan waxaa ku yaal xeelado dhawr ah oo laga yaabo inaad aqoon u leedahay iyo sida la isugu geeyo ka-qaybgal ballaadhan.
Isugeynta waxyaabaha firfircoon iyo isku milmay
Markaad isla guursataan, isku milmeynta iyo muujinta muuqaalka firfircoon waa lammaane awood leh. Iyagoo adeegsanaya meeris meeris ah iyo muujinta firfircoon ee firfircoon, suuqgeeyayaasha emaylku waxay u abuuri karaan farriimo emayl shaqsiyeed macaamiil kasta oo gaar ah. Waa tan sida ay u shaqeyso.
Isku milmaan Mega - Iyagoo adeegsanaya meeris meg ah, suuqleyda ayaa ku jiidi kara macluumaadka dadka iyo taariikheed waxa ku jira iimaylka. Waxaan ogaanay in inta badan magaca macaamiisha la xuso, sida ugu guuleysiga badan e-maylka ayaa ah. “Magaca qaaliga ah” kuma filna intaas ka dib. Iyada oo la isku daro meg, suuqleyda ayaa shakhsi ka dhigi kara magaca, goobta ama astaamaha kale ee dadka si ay si otomaatig ah u shakhsiyeeyaan emaylka. Tani waxay leedahay faa iidada dheeriga ah ee ku hagista indhaha akhristaha halka aad ka rabto adoo adeegsanaya magaca akhristaha ama macluumaad kale oo isku dhafan.
Soo bandhig muuqaal kooban - Dhammaan macluumaadka macmiilka ee laga soo dhejiyay mege meer ayaa markaa lagu dari karaa emayl dalab ah lana jaan qaadi kara macmiil kasta oo u gaar ah e-mayl. Sida magacaba ka muuqata, mawduucyada firfircoon ayaa isbeddelaya iyadoo lagu saleynayo wax ku biirinta. Fiidiyowyada wax ku oolka ah ee firfircoon ee firfircoon ama istiraatiijiyaddu waxay ka kooban yihiin macluumaad la isku daray.
Tusaale ahaan, shirkad soo dhaweyn oo ballaaran dhowaan Sanadka Dib u eegista emaylka, shirkaddu waxay soo jiiday magacyada kuwa abaal-marinta haysta, imisa hudheello - iyo goobta - abaal-marinno qaas ah oo ay ku sugnaayeen, oo ay weheliyaan hudheelo iyo goobo lagu taliyay oo ku saleysan taariikhda joogitaanka. Waxyaabaha la isku daray ee meg ayaa la beddelay iyadoo lagu saleynayo cinwaanka emaylka. Markaa laba qof ma helin isla emayl isku mid ah - abaalmarin kastaa wuxuu heystaa fiidiyow u gaar ah oo loogu talagalay khibradooda.
Astaamaha kale ee muhiimka ah oo la isku daray
Suuqgeynta iimaylka casriga ahi kuma eka guurka meeris meeraha ah iyo waxyaabaha firfircoon. Suuqyayaashu waxay wax ka beddeli karaan suuqgeynta emaylkooda iyagoo isku daraya tabaha dhaqameed iyo tikniyoolajiyad cusub.
Jaangooyooyin isku dhafan oo la qaadi karo - Emailada ugu wax ku oolka badan ayaa u oggolaan doona waxyaabaha la qabsan kara halka uu macaamilku ka furayo emayl (taleefan, desktop, iwm.), Oo ay leeyihiin boqolkiiba 21 ka sarreeya oo ah guji-u-furan. Laakiin naqshadeynta jawaabta ah maahan wax cusub oo suuqleydu waxay ku qaadi karaan hal tallaabo oo dheeri ah a Qaabka isku-darka wareega ee wareega kaas oo bixiya hal qaab oo loogu talagalay shaashadaha waaweyn iyo kuwa yaryarba. Qaybta ugu fiican ee ku saabsan qaabeynta? Boqolkiiba boqol ayaa la akhrin karaa umana baahna isticmaaleyaashu inay weyneeyaan ama qanjaruucaan. Asal ahaan, tani waa naqshad wax ku ool ah oo saxan.
Qeybaha bulshada - Emailku waa weyn yahay, laakiin wuu sii xoog badan yahay marka lagu daro warbaahinta bulshada. Suuqyayaashu waxay ku hagaajin karaan dadaalkooda suuqgeynta emaylka adoo fulinaya qaybaha bulshada - waxyaabaha bulshada ka mid ah (sida tweets, sawirro ama faallooyin) oo si toos ah loogu jiido farriinta emaylka. Tani waxay bixisaa cusbooneysiin dhab ah oo ku saabsan falcelinta macaamilka ee ku aaddan sumadda, waana hab fiican oo looga hawlgeli karo dhagaystayaasha emaylka.
Ku darista waxyaabaha bulshada ka dhex imanaya emaylka, magacyadu waxay ku dhiirrigelin karaan macaamiisha inay wadaagaan heshiisyo, taas oo u oggolaan doonta suuqleyda inay la socdaan u doodayaasha calaamadaha isla markaana u habeeyaan heshiisyada mustaqbalka kuwa saamaynta leh.
Boqolkiiba 100 ayaa la aqrin karaa iyadoo sawirada lasaarayo - Sannadkii hore, Google ayaa heshay taas saamaynta xannibaadda sawir 43 boqolkiiba e-mayl, Ku adkeynaya suuqleyda inay si dhaqso leh ula xiriiraan macaamiisha isla markaana u diidaan muuqaalka emaylka. Si kastaba ha noqotee, ku darista sawirrada iyo waxyaabaha ku jira tiknoolajiyada cusub waxay u oggolaaneysaa noocyada inay la xiriiraan macaamiishooda, iyadoon loo eegin goobaha emaylkooda.
Boqolkiiba boqol oo la akhrin karo oo leh sawirro muuqaal ah waxay xaqiijinayaan in dhammaan qoraalka la muujiyo lana akhriyi karo, in sawirrada la raro iyo in kale, taasoo u oggolaanaysa calaamaduhu inay aragti weyn ku yeeshaan emayladooda oo ay farriintooda si saamayn leh ugu gudbiyaan.
Waxyaabaha ku dheggan - E-maylka dhiirrigelinta iyo iibinta ayaa lagama maarmaan u ah kordhinta dakhliga, laakiin ka sii xoog badan marka lagu daro waxyaabaha ku dheggan - farriinta ku saleysan mawduucyada oo aan si toos ah uga iibin rukunka, laakiin halkii ay ka bixinayso farriin xiiso leh oo khuseysa (kedis, talooyin, iwm). Nooca noocan ah kordhinta emaylku wuxuu ku furmayaa boqolkiiba 12-24.
Macaamiisha had iyo jeer ma joogaan boos ay wax ku iibsadaan, natiijadeeduna, ma raadinayaan emayl xayeysiis ah. Adoo shakhsiyeeya emaylka ku saleysan meertada nololeed ee macaamilka, suuqleydu waxay sii hayn karaan qaybo gaar ah illaa ay diyaar u yihiin inay markale iibsadaan.
Ololeyaal suuqgeyn weyn oo suuqgeyn ah waa inay keenaan natiijooyin sida qasabno kordhaya, furitaan iyo iibsasho. Isku darka tikniyoolajiyadda iyo xeeladaha, suuqgeeyayaasha emayllada waxay u gudbin karaan farriimo soo jiidasho leh si hufan si ay uga sarreeyaan yoolalka suuqgeynta. Si aad u aragto qaar ka mid ah noocyada ugu casrisan e-mayl-suuqgeynta, iska hubi sanadkan Eeg Email Naqshadeynta Emailka ee Yesmail.
Tags: nuxurka firfircoonhawlgelinta emaylkaemaylka sawirka alt tagssawirada emaylkaEmail Marketingemaylka ku soo dirQaab dhismeedka isku dhafanxannibaadda sawirkamilmaanQaabka emaylka gacantaQaabka wareegaheerka furanQaab-dhismeedka emaylka ee la qaadi karoqaybaha bulshadawaxyaabaha ku dhegganismail
Hormoodka naqshadeynta emaylka illaa 1999, isagu waa aasaasihii YesmailKooxda abaalmarinta ku guuleysatay ee Adeegyada Hal-abuurka (macaamiisha waxaa ka mid ah HP, Coca-Cola, At & T, eBay, Kodak, Microsoft, Intel, Warner Bros & kuwo kaloo badan). Matthew wuxuu ka qaatay Shahaadada Bachelor Degree ee Suuqgeynta Jaamacadda Indiana wuxuuna wax ku bartay Naqshadeynta Farshaxanka / Naqshadeynta ee Pacific Northwest College of Art iyo Kuliyadda Farshaxanka & Farshaxanka ee Oregon. Matthew wuxuu horey u ahaan jirey Agaasimaha Creative for ThrustMaster, Labtech, Logitech iyo @Once.
7 Sababood oo Mawduucaagu ugu guuldareysto inuu la qabsado Millennials-ka